कोख भाडामा दिने कानून ल्याउन ‘लबिङ’, स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- सकेको सहयोग गर्नेछु | Suvadin !
काठमाडौं । शुक्रबार फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा डा. भोला रिजालले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई संकेत गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, ‘सरोगेसी सेवा कानून’ बनाउन पहल गरिदिनुपर्यो ।’
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि स्वास्थ्यमन्त्री यादव थिए। स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा लगायत कार्यक्रमका पाहुना थिए।
उनीहरूतर्फ संकेत गर्दै डा. रिजाल बोलिरहेका थिए, ‘सरोगेसी कानून नभएकै कारण धेरै निःसन्तान दम्पतिहरुले सन्तानसुख पाएका छैनन्। नेपाली आमाले नेपाली दम्पतिका लागि नेपालमै बच्चा जन्माउने गरी कानून ल्याउनुपर्छ।’
स्वास्थ्यमन्त्रीले डा. रिजालको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहे। आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि उनले भने, ‘राम्रो कामको थालनी गर्न लागेकाहरुलाई सकेको सहयोग गर्नेछु ।’
यो कार्यक्रमको उद्देश्य कोख भाडामा दिने गरी कानून बनाउन ‘लबिङ’ गर्नु थियो। डा. रिजाल फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । यो संस्थाले नेपालमा निसन्तान भएका दम्पत्तिहरुको लागि काम गर्दै आएको छ ।
डाक्टर रिजाल इनभर्टो फर्टिलाइजेशन प्रविधि (आईभीएफ) को माध्यमबाट पनि बच्चा जन्माउन असमर्थ दम्पत्तिका लागि ‘सरोगेट मदर’ चाहिन्छ भनेर बुझाउन खोजिरहेका थिए । उनको तर्क थियो, ‘टेस्टट्युब बेबीसमेत राख्न नमिल्ने गरी कसैको पाठेघर बिग्रिएको छ भने उसले सन्तानको सुख नै नपाउने ? उस बहिनी या अरु कसैले उस्को लागि सन्तान जन्माइदिन तयार हुन्छ भने अवसर नै नदिने ?’
डा रिजालको तर्कमा सहमति जनाउँदै थापाथली प्रसुती गृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बोले, ‘नेपालीका लागि नेपाली महिला नै ‘सेरोगेट मदर’ बनाउनुपर्ने कानून ल्याउन सकिन्छ । विदेशीलाई सेवा दिने हकमा भने सोच्नुपर्छ ।’
त्यहाँ उपस्थित अधिकाशं चिकित्सिकहरु ‘सेरोगेट मदर’ को कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा सकरात्मक थिए। अधिकाशंको एउटै तर्क थियो, ‘एक व्याक्तिको कलेजो अर्को व्याक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ। मिर्गौला साटासाटा गर्न मिल्छ। त्यसैले आफ्नो श्रीमतीले बच्चा जन्माउन नसकेको अवस्थामा कोही श्रीमानले आफ्नो विर्य अरु कसैको पाठेघरमा हालेर बच्चाको बाउ बन्न पाउनुपर्छ।’
‘सरोगेट मदर’को बहस नेपालको लागि नयाँ होइन । चार वर्षअघि यही कारण केही अस्पतालमा लफडा समेत भएको थियो । त्यसपछि यो त्यतिकै बहस सेलायो। यतिबेला फेरि सरोगेसी सेवासम्बन्धी कानून बनाउन डा. रिजाल लबिङ गरिरहेका छन्।
‘पहिला गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ भन्दा मलाई धेरै गाली गरे तर, भएरै छाड्यो । टेस्टट्युब बेबी सुरुवात गर्ने बेलामा पनि त्यसरी नै खेदो खने । त्यो पनि सफल भयो’ उनी भन्छन्, ‘सरोगेसीमा पनि खेदो खन्छन् तर निःसन्तान दम्पत्तिहरुको लागि यो चाहिन्छ चाहिन्छ ।’ मन्त्री र सचिवले नै सकेको सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि डा. रिजाल उत्साहित देखिएका छन्।
फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालको दाबी छ कि ३३ प्रतिशत महिलामा निः सन्तानको समस्या छ । त्यस्तै पुरुषहरु सङख्या पनि यही हाराहारीमा छ।
१२ प्रतिशत महिला तथा पुरुष दुबैमा निःसन्तानको दोष छ। टेस्ट्युब बेबी प्रविधि प्रयोग गरेर बच्चा जन्माउन नसक्ने दम्पत्तिहरुको एकिन तथ्यांक भने छैन् ।